कैलालीमा अचम्मको परिवार, जहाँ एकै घरमा बस्छन ५० जनाको सदस्य !
काठमाडौँ , तपाईको घरमा कति सदश्य हुनुहुन्छ ? ४ जना, ६ जना या त १० जना तर हरेकको बिचार फरक हुन्छ ,हरेकको रुचि फरक हुन्छ ,एउटाले भनेको अर्कोलाई मन पर्दैन ,मन मुटाव हुन्छ। अझ विवाह गर्ने बित्तिकै छुट्टिएर अलग अलग भएर बसिहाल्छन। बाबु आमा बुढा बुढी भए भने बृद्धाआश्रम लगेर छाडी दिन्छन र आफ्नो आफ्नो सुर गरेर बस्छन। यसरी मानिसहरु एकलकाटे जीवन जिउन थालिसकेको अवस्थामा कैलालीमा भने यस्तो उदाहरणिय परिवार रहेको छ ,जहा एकै परिवारमा ५० जना सदस्य मिलेर बसेका छन्।
५० जनाको परिवारका लागि खाना बनाउने सन्दर्भमा महिला सदस्यहरुले हरेक महिना ३/४ जनाले पालो पालो गरेर खाना बनाउने नियम राखिएको छ। संयुक्त परिवारमा बसेर कुनै प्रकारको समस्या नभएको घरका सदस्यहरु भनाइ रहेको छ।यस परिवारमा सबै सदस्य संगै भेट हुन लगभग कठिन नै हुने गरेको छ। घरका युवा सदस्यहर कोहि काम शिलशिलामा त कोहि पढाईको शिलशिलामा घरबाट बाहिर रहेका छन। सबैको सहमति र सहकार्य भएमा घर व्यवहार धान्नु सामान्य कुरा रहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ।
परिवारको मुख्य पेशा खेती किसानी नै हो यसको अलावा यी परिवारको आफ्नै किराना पसल , भेटनरी पसल तथा फार्मेसी समेत संचालन गर्दै आइरहेका छन। एक थुकी सुकी सय थुकी नदि बन्छ भन्ने सफल उदाहरण यस परिवारले दिन खोजेको छ। यी सबैको लागि परिवारको मन मिल्नुपर्ने आपसी सहकार्यको जरुरी रहेको समेत परिवारको सदस्यको भनाइ रहेको छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ३१, २०७६०६:३४
यी हुन् विश्वको सबैभन्दा खतरनाक सिरियल किलर ,जसले अस्पतालबाटै लिए यती धेरैको ज्यान !